पोखराको प्याराग्लाइडिङले एशियाडमा दुई दशकपछि रजत पदक मात्र जितेन, टीम गेममा पहिलो पदक समेत जित्न सफल भयो । प्याराग्लाइडिङले गत साता दिलाएको यही पदककै कारण दक्षिण एशियामा भारत पछि दोस्रो र प्रतियोगितामा सहभागी ४५ देशमा नेपाल ३३ औं स्थानमा रहन सफल बन्यो ।
उनले आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङ समेत थपिने र यो सहित सात खेल पोखरामा आयोजना हुने बताए । उनले सागलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सरकारले पूर्वाधार निर्माण लगायतमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विष्टले नेपालमा हुने १३ औं साग खेलकूद प्रतियोगिता भौतिक संरचनाका कारण प्रभावित नहुने र तोकिएको समयमा हुने समेत दाबी गरे ।
‘हामीले यसका लागि सरकार संग यथासिघ्र प्रक्रिया थाल्न भनेका छौं ’ उनले भने – ‘राष्ट्रिय खेलकुद हामीले गर्ने हो, साग सरकारले नै गर्ने हो । अहिले भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न साढे १ अर्ब तुरुन्त मागेका छौँ ।‘ सागको तयारीस्वरुप हालसम्म पूर्वाधार निर्माण लगायतमा दुई अर्ब भन्दा बढी लगानी भैसकेको र त्यसैलाई
लक्षित गरी पोखरामा एक अर्व २९ करोड रुपैयाको लगानिमा सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणको प्रकृया अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । उनले यसको टेन्डरका अन्तिम प्रक्रियाहरु केही दिनमा सकिने बित्तिकै ६ महिनामा काम सक्ने गरि कामको जिम्मेवारी दिने बताए । उनले भारतीय र चिनियाँ कम्पनीले नेपाली ठेकेदारसँग मिलेर टेण्डर हालेको र यसको प्राविधिक तथा वित्तिय पक्षबारे जानकारी लिईरहेको उल्लेख गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा काठमाण्डौ खाल्डो बाहिरका पत्रकारहरु किन सहभागी नगराईने ? राजधानीका पत्रकारको सिण्डिकेट वा सरकार, राखेपलाई नै बाहिरका पत्रकार नचाहिने ? भन्ने प्रश्नमा विष्टले खर्च कटौतीका कारण कम पत्रकार लैजानुपरेको र अबदेखि पालैसँग समेट्दै जाने बताए । मञ्चका अध्यक्ष केशव पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव रञ्जन अधिकारी लगायतले बोलेका थिए ।